Haweenka iyo Qosyka, 05 October 2019
Sabti 5 October 2019
Haweenka iyo Qoyska: Hooyooyinka Wada Uberka
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay hooyooyika qurba joogta ah ee ku shaqeysta Uberka.
Haweenka Iyo Qoyska: Kootada Haweenka ee Maamulka Koofur Galbeed
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay Haweenka Koofur Galbeed Soomaaliya oo olole ugu jira sidii ay kooto 30% ah ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka maamulka.
Gabar Sheegtay in Dhibaato Loogu Geystay Wiil u Dhashay Congo oo Ay Guursatay
Shabakadaha warbaahinta bulshada ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxaa la soo dhigay muuqaal vidiyow ah oo muujinaya gabar soomaaliyeed oo dacdarreysan oo ka cabaneysa in dad Soomaali ah ay dhibaato ugu geysteen nin u dhashay dalka Congo darteed, kaasoo ay u dhashay laba carruur ah.
Haweenka iyo Qoyska: Cabsida dumarka ay ka qabaan in ilmaha lagu qalo.
Barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan cabsida dumarka uurka leh ay ka qabaan in ilmaha lagu qalo.
Sidee ayay xirashada kabaha ciribta dheer leh u saameeysaa caafimaadka haweenka? Xirashada kabaha leh cirbaha dhaadeedheer waxay sababaan dhabar xanuun, simo xanuun, cago hur, iyo waxyaabo kale oo badan sida uu sheegayaan dhaqaatiirta ku taqasusay daryeelka lafdhabarta.
Xirashada Kabaha Ciribta Dheer Leh
Haweenka iyo Qoyska: Faa'iiada la Saaxiibista Carruurtaada
Dhageyso Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska toddobaadkan ku saabsan kaalina ay saaxiibtinimada ka dhaxeysa waalidka iyo carruurtiisa ka qaadan karto in ulmuhu u hoggaansamo hab-dhaqanka uu waalidku doonayo in ilmihiisa u qaato.
Haweenka Iyo Qoyska: Ruquyo Kuusow iyo Ifraax Xasan
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay sheekada Ruquyo Kuusow iyo Ifraah Sucdi Xasan oo ah laba gabdhood oo iyagoo haysta shaqo xirfadeed mushaar sare leh haddana ka door biday inay iyagu isu shaqeeyaan.
Haweenka iyo Qoyska: Carruura iyo Aaladaha Casriga ah
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay sida ay carruurta yar yar u qabatimaan aaladaha casriga ah sida telefoonada iyo ipadyada, iyo qaababka ay waalidiintu uga xakamayn karaan carruurtooda inay waqti badan adeegsadaan aaladahani
Haweenka iyo Qoyska: Muna Ismaaciil
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska ee toddobaadkna waxaa marti ku ah Muna Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida ah ee Hilib Xalaalka ku leh magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska
Dhageyso Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska oo toddobaadkan ku saabsan magac bixinta carruurta Soomaalida ee waayadan oo aad uga duwan kii waayadii hore
Barnaamijka Haweenka iyo Qoyska: Duruufaha Carruurta Iskoriska ah
Dhageyso barnaamijka haweenka iyo Qoyska oo ku saabsan duruuaha ay ku nool yihiin carruurta iskoriska ah ee ku dhaqan dalka